Kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta furmay
Fadhiga maanta oo si toos ah looga tabinayo qalabka warbaahinta maxalliga ah, ayaa waxaa kasoo qeybgalay madaxda ugu sarreysa dalka, sida gudoomiyaasha labada aqal ee Baarlamaanka, madaxweynaha jamhuuriyadda, ra'isulwasaaraha, duqa magaalada Muqdisho, mudanayaasha labada aqal iyo golaha wasiiradda.
Xoghayaha guud ee JESOJ, Maxamed Ibrahim Nur Macallimu ayaa cambaareeyay go'aan uu sheegay in guddoonka baarlamaanka ay uga hor-joogsadeen wariyaasha madaxa bannaan qaarkood in ay kalfadhiga todbaad sooo tabiyaan.
Madaxweyne Farmaajo, waxyaabihi ugu muhiimsanaa ee uu kusoo qaaday khudbaddiisii la wada sugay, codsi uu u jeediyay mudanayaasha Golaha Shacabka, oo uu ka codsaday in ay ku raacaan meel-marinta maqaamka siyaasadeed ee caasimadda Muqdisho.
Wuxuu kaloo ballan qaaday in doorashooyinka Soomaaliya ee foodda nagu soo heysa ay waqtigooda ku dhici doonaan. Arrintaan ayay siyaasiyiinta mucaaradka iyo hey'adaha iyo dalalka caalamiga ah ee taageera dowladda wal wal ka qabeen maalmahaan,kaddib marki uu soo baxay shaki ah in dowladda ay daneyneyso muddo kororsi.